कतै बिहान उठ्नेवित्तिकै तनावमूक्त त हुनुहुन्न ? उसोभए अब हाँस्न पो सिक्ने हो कि, - SandeshBahak
कतै बिहान उठ्नेवित्तिकै तनावमूक्त त हुनुहुन्न ? उसोभए अब हाँस्न पो सिक्ने हो कि,
यौन स्वास्थ्य समाचार
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०५:२६ August 13, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on कतै बिहान उठ्नेवित्तिकै तनावमूक्त त हुनुहुन्न ? उसोभए अब हाँस्न पो सिक्ने हो कि,
हाँस्न छाडियो भने जिन्दगी कस्तो होला ? जब मान्छे हाँस्दैन तब उ तनाबमा पर्छ । चारैतिर अँध्यारो देख्छ । विशेष त विहान उठ्नेवित्तिकै मानिसको मुड कस्तो छ ? कस्तो बनाउने ? दिमागलाई कसरी तनावमूक्त बनाई दिनभर हाँसिरहने त ? आउनुस् खुलेर कुरा गरौँ, हाँसेर जीवन सँधै उज्यालो बनाउने कला :
अप्रिल ६ तारीख बिश्व हाँसो दिवस समेत मनाइन्छ । बिहानको हाँसोले नै तपाईको दिनभर गरिने कार्यलाई जनाउँछ । विहानका तनावमूक्त हाँसोसहित थालनी गर्नुभएको काम सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ ।
असफलतालाई झेलेर सफलता चुमेका व्यक्तिहरु, जस्ले राजालाई नै पछि पारे
‘झार उखेल्नु, बढार्नु, बाँदर धपाउनु श्रम हो तर, केही बुद्धिजीवहरुले यसको आलोचना गरेका छन्’
१९ श्रावण २०७६, आईतवार १५:२७ August 4, 2019 Sandesh Bahak
२१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०६:५० March 5, 2019 Sandesh Bahak